Kanye West Biography, Rapptoal Rapper
I-Superstar ye-Hip-Hop eyaziwayo kunye neNkathazo
U-Kanye Omari West (owazalwa ngoJuni 8, 1977) waphuma ekholejini ukuba aqhube phambili emisebenzini yomculo we-rap. Emva kokuphumelela kokuqala njengomvelisi, umsebenzi wakhe waqhuma xa waqala ukurekhoda njengomculi wecandelo. Kungekudala waba yinto ephikisanayo neyabonakalayo kwi-hip-hop. Ukuziqhayisa kwakhe nge talente kuye kwaxhaswa ngesitya sokudumisa ukuphumelela komculo kubo bobabini abagxekayo kunye noontanga bakhe.
UWan West wazalwa e-Atlanta, eGeorgia.
Uyise, uRay West, wayengumalungu weqela le-Black Panther kwaye wayengomnye wabafuphi bezithombe abamnyama ababeqeshwe yiphephandaba elithi "Atlanta Journal-Constitution". Unina waseWest, uDkt. Donda West, wayengumfundisi weNgesi owayesethatha umhlala-phantsi e-Chicago State University ukuze akhonze njengomphathi wonyana wakhe de wafa ngo-2007. Abazali bakaKyan West bahlukana xa beneminyaka emithathu ubudala. Wahamba nonina waya e-Chicago, e-Illinois kwaye wakhulela kwi-Oak Lawn.
IWest yaqala ukuhlola kwibugcisa kwasebuncinci. Waqala ukubhala inkondlo eneminyaka emihlanu kwaye waqhubeka nomdla ekuboneni kwibakala lesithathu. Waqalisa ukubetha ngelixa ebangeni lesithathu kwaye waqala ukubhalela yakhe imisebenzi kwibakala lesixhenxe. Ngethuba esikolweni esiphakeme, uKhan West waba ngabahlobo abasondeleyo nomvelisi we-hip-hop Akukho sazisi Bafaka ubudlelwane bokucebisa njengeetalenta zaseNtshona.
Impumelelo Impumelelo kunye neDebut Album Breakthrough
Xa eneminyaka engama-20, uKhan West waphuma ekholejini ukuba ukhathaza ukuba ishedyuli yakhe yeklasi iya kuphazamisa ukukhula komculo wakhe.
Phakathi kwesakhiwo sokwazisa njengomvelisi ophezulu we-hip-hop phakathi no-1990, uKhan West wajoyina iqela le-rap elibizwa ngokuba yi-Go-Getters. Bakhulula i-albhamu yabo ye-studio kuphela "Abalobi beRekhodi Yehlabathi" ngo-1999.
Ngo-2000, uKhan West waqalisa umsebenzi wokuvelisa i - label ye-Jay-Z ye- Roc-a-Fella Records okubangela ukuba kubekho uphando olukhulu lwemveliso yomculo.
Wanikwa inkokhelo ngokuncedisa i-Jay-Z yokuqalisa umsebenzi owawuqala ukutshabalalisa nge-albhamu eyaziwa ngokukhawuleza ka-2001 ethi "The Blueprint." IWest ibuye ivelise iirekhodi ngamaninzi ahlukahlukeneyo aquka uJanet Jackson, uAlicia Keys, noLudacris.
Nangona impumelelo yakhe yemveliso, uKhan West wayefuna ukuba ngumculi we-rap. Ingozi yemoto ephantse yingozi ngo-Oktobha 2002 yayiyindawo ebalulekileyo yokujika. I-West yaphuma esibhedlele kunye nomhlathi wayo owawunqambile wired closed to facilitate reconstruction. Ngomlenze usalindile ukuvala, wabhala ingoma ethi "Ngomnxeba," kwaye ugxininiso lwakhe ebomini bakhe banika uKhan West isiluleko kwi-albhamu yakhe yokuqala ethi "The College Dropout."
Emva kwezinto ezintathu zokuhlehliswa ekukhutshweni ngenxa yokutshintshwa kweminye yokugqibela kunye neyehlengahlengiso kwiirekhodi, "Ikholeji yokuLahla" ekugqibeleni yafika ezitolo ngoFebruwari 2004. I-albhamu yaphakama kwi # 2 kwiimpawu ze-US ezinokubaluleka okukhulu. Ukutshitshisa ama-singles angama-"I-Jamz ye-slow" kunye ne "Jesus Walks," i-albhamu yathengise ngaphezu kweeikopi ezizigidi ezi-3 kwaye iphumelele iAgrammy Award ye-Best Rap Album ngenkathi ifumana i-albhamu yonyaka.
Stardom kunye neengxabano
UWan West wasebenzisa iidola ezimbini zeedola waza wathatha umnyaka ukuhlanganisa i-albhamu yakhe yesibini ye-studio "Ukubhaliswa Kwexesha Elide." Enye yeempembelelo zakhe eziphambili yi-albhamu ephila ngo-1998 ethi "Roseland NYC Live" yiqela laseBrithani le-hop-hop ePortishead.
Wathandwa yinyongezo ye-New York Philharmonic Orchestra ekurekhodeni. IWest iqeshe i-orchestra yomtya kwaye idibanisene nomqambi womdlalo wefilimu uJon Brion ngeendlela ezininzi zokubhalisa "emva kwexesha."
Ukukhishwa ngo-Agasti 2005, "Ukubhaliswa Okukhawulezileyo" kwinqanaba elingu-1 kwi-ishadi le-albhamu kwaye kufakwe i-# 1 ip hit hit single "Gold Digger." Yathengisa iikopi ezingaphezu kwezigidi ezimbini ngasekupheleni konyaka. Ukuphumelela kwe-albhamu yesibili kwaxhatshazwa ngandlela-thile ngu-Kanye West yokuqala ingxabano yesizwe ngoSeptemba. Wakhethwa ukuba athethe ngexesha le-TV ye-NBC "I-Concert ye-Hurricane Relief" ukuze izuze iNtshonalanga yeKatrina . Wathetha kunye nomlingisi uMike Myers waza waphambukela kwiskripthi. Amazwana aseNtshona, "uGeorge Bush akakhathaleli ngabantu abamnyama," kubangele ukuvakalelwa kwelizwe. UMongameli uGeorge W. Bush kamva wabiza ukuva enye yezona "zihlandlo ezinonononeleyo" zobuongameli bakhe.
Emva kokutyelela unyaka kunye ne-rock band U2 kwi "Vertigo Tour" yabo, iWan West yagqiba ukusebenza ekudaleni umsindo womculo we-rap yakhe. Waphendukela kubaculi bamatye abaqhelekileyo abafana ne- Rolling Stones , uLed Zeppelin , kunye noBob Dylan ngokuphefumlelwa. Isiphumo sasiyi-albhamu yakhe yesithathu "studu." Kukhishwe ngoSeptemba 2007, kuthengise iikopi ezikwimizuzu engama-million kwiveki yokuqala kwaye yaqala kwi-chart ye-albhamu. Kuye kwenye indawo ye-# 1 ep hit hit single "Stronger" eyathatha isampula umculo weFrench electronic duo Daft Punk .
IWest ayizange igule ixesha elide ukugubha ukuphumelela kwayo kwangoko ngaphambi kokuba iqhubekile. Umama wakhe uDonda West wasweleka ngokungalindelekanga ngoNovemba 2007. Ukufa kwakhe kwachaphazela kakhulu umyalelo we-Kanye West yomculo. Echaza ukuba wayengenakukwazi ukubonisa ngokwaneleyo uluhlu lweemvakalelo azivelayo ngokudlwengula kuphela, uKyan waqala ukucula nokusebenzisa i- Auto-Tune technology ukuguqula iitoni. Isiphumo sesilingo sakhe esitsha sasingumculo we-melancholy "808s kunye ne-Heartbreak" ekhishwe ngoNovemba ka-2008. Kuquka ukusetyenziswa okubanzi komshini we-drum we-Roland TR-808 okhankanywe kwisihloko kunye neendidi eziphezulu ze-pop zengqungquthela ezithi "Love Lockdown" kunye "Engenasiphelo."
Ngonyaka olandelayo ngo-Agasti 2009 kwi-MTV Video Music Awards, iKhan West yadala ingxabano ebaluleke kakhulu yomsebenzi wakhe. Phakathi kwentetho kaTaylor Swift eyamkela ibhaso kwiVideoskazi yeTest Female, i-Kanye yahlawulisa isiteji, yathatha imakrofoni, yathi i-video ye- Beyonce ekhethiweyo kunye ne "Ladies Ladies" ("yiyo," enye) iividiyo ezingcono kwixesha lonke. " Ukuziphatha kwakhe kwacaphukisa ishishini lomculo kunye nabadlali bomculo ngokufanayo.
Ekuvukeni kwesi siganeko, uhambo olulungisiweyo kunye no- Lady Gaga lwacinywa.
Emva kokuxabana kweMTV Video Music Awards, uKick West wathatha isikhephe esifutshane somsebenzi wakhe womculo ngaphambi kokuba ahlale eHawaii asebenze kwi-albhamu entsha. Ukusebenza kunye neentlobo ezahlukeneyo zabaculi kunye nabavelisi, wenza i-epic musical epic "My Beautiful Dark Twisted Fantasy." Ekhutshwe ngoNovemba 2010, ithole ukunyaniseka okubalulekileyo kwaye yatshitshisa # # kwidilesi ye-albhamu. Ingoma ethi "Zonke iIzibane" zathola i-Grammy Award ye-Song of the Year, kunye no-Kanye wadala i-movie yemizuzu engama-35 ukuhamba kunye nengoma ethi "Runaway."
Ukulandela intsebenziswano kunye noJay-Z kwimpumelelo yokubukela i-albhamu kunye nekhenkethi, uWest waqala ukusebenza kwi-albhamu yakhe yesithandathu ye-studio eParis. Ngokugqibeleleyo wenza isigqibo sokungayihoxisi ukukhathazeka kwezorhwebo kunye neempembelelo ezibandakanya iintlobo zomculo ezibandakanya umculo we-Chicago, uhlobo lomgibe kunye nomculo womdaniso we-industrial. Ngeveki ezimbini ngaphambi kokuba kukhululwe i-albhamu, i-rocker and rap raper umlimi uRick Rubin wangeniswa ukuba ahlabe umculo phantsi kwefomistist. "Yeezus" yavela ngoJuni 2013 phakathi kweengxelo ezibalulekileyo ezibukhali. Iqala kwi # 1 kwidilesi ye-albhamu.
Emva kokuzalwa komntwana wakhe wokuqala nomtshato wakhe, uKhan West ukhulule "Nguyedwa kuphela," umtshato onobambiswano kunye nomculo weBeetles uPaul McCartney ngoDisemba 2014. Aba babini babambisana noRihanna malunga ne-5 ephezulu ye-"FourFiveSeconds" engatshatanga ngoJanuwari 2015. .
Omnye ongatshatanga "Usuku Lonke" lwabonakala ngo-Matshi, kwaye uKyan wachaza ukuba wayesebenza kwi-albhamu yakhe elandelayo ngokuthi "SWISH".
Emva kwesinye ishintsho somxholo kunye nokulibaziseka ngakumbi, i-albhamu ethi "Ubomi bePablo" yaqala kwi-Tidal yokusabalalisa umculo wenkonzo. Emva kokukhululwa kwayo, uKhan West waqhubeka nokuguqula imixube yeengoma ezininzi kwaye wathi i-albhamu yayinguye, "ukuphefumula okuphilileyo okuguqulayo." "Ubomi bePablo" baba yi-albhamu yokuqala yokushaya # 1 esekelwe ngokusisigxina kwi-streaming.
Emva kweminyaka emine yokuthandana kwaye, uKhan West waqalisa ukuzibandakanya no-Alexis Phifer ngo-Agasti 2006. Nangona kunjalo, ukubandakanyeka kwaphela ngo-2008 kwiinyanga ezilandelayo emva kokufa kukaMama kaDan. Wayebonisa umzekelo u-Amber Rose ukususela ngo-2008 ukuya ku-2010.
Ngomhla ka-Apreli 2012, iWest yaqala ukuthandana nenye inkwenkwezi ye-TV, uKim Kardashian. Baqala ukusebenza ngo-Oktobha 2013 baza batshata ngoMeyi 2014 eFlorence, e-Italy. Esi sibini sinabantwana abathathu, iintombi ezimbini zaseMntla kunye neChicago, kunye nonyana omnye uSaint. Ubudlelwane beNtshona-Kardashian ngumxholo oqhubekayo wokuhlolisisa i-tloid.
Ngaphandle kwamajelo okuphikisana kunye neentengiso ezithintekayo eziza kugxotha abantu abadumileyo, uKhan West uyahlala enye yeengcali zokurekhoda ezivakaliswayo emva konyaka ka-2000. Abachasayo kunye nabalandeli bamlandela ngokufanayo kumculo owelula ngokungqongqo imida yelovu -hop. Ufumana ikhredithi ngokulawula i-genre kude ne-predominance ye-gangsta rap kumculo obaluleke kakhulu kunye nokucinga ngokubandakanya iimpembelelo ezivela kwezinye iintlobo zomculo.
Ukongeza kwimpumelelo yakhe yomculo, uKhan West uye wazibonakalisa ukuba uyindoda yeqhinga elichanekileyo kunye nelizwi elibonakalayo kwishishini lefashini. Kungakhathaliseki ukuba yintoni imbono yakhe ngaye, iWest ihlala ifuna iindwendwe zikarhulumente kwaye zifumana ingqwalaselo ephezulu yoluntu.
"UYesu Uhamba" (2004)
"IGold Digger" kunye noJamie Foxx (2005)
"Ukubaleka" kunye nePusha T (2010)
"Zonke iiLights" kunye noRihanna (2010)
"UNiggas eParis" kunye noJay-Z (ngo-2011)
"FourFiveSeconds" kunye noPaul McCartney noRihanna (2015)
"Yonke imini" (2015)
I-Grammy Award - I-albhamu ephezulu yeRiphabhuliki - "Ikholeji yokuLahla" (2005)
I-Grammy Award - I-albhamu ephezulu yeRiphabhuliki - "Ukubhaliswa kwangethuba" (2006)
I-Grammy Award - I-albhamu ephezulu yeRiphabhuliki - "Iziqu ezithweswa iziqu" (2008)
I-Grammy Award - Best Album Album - "My Beautiful Dark Twisted Fantasy" (2012)
Amabhaso omculo we-MTV Video - I-Vanguard Award (i-2015)
> Ukufundwa nokuBuncelwa
Beaumont, uMark. Kanye West: UThixo kunye noMonster. Omnibus, 2015.
7 Iintlobo ezininzi zeMpahla yokuHlaba kwe-Hip-Hop
Iintlanzi ezilishumi eziphezulu kakhulu zikaBrian McKnight
Iingoma ezi-16 eziphambili zeRap Rap
Boyz II Amadoda ama-10 aphezulu kakhulu
I-10 ephezulu uGwen Stefani / Akunakho ukungathandabuzeki
Ukusetyenziswa kotywala kokusetyenziswa koTywala kwaBafundi beeKholeji
Yintoni uThixo NoThixokazi Owenza NgamaPagan Onqulo?
Ileta yokuBhenela iSampula yoTywala oluNxulumene noTywala
Ukubhiyozela iBagavad Gita Jayanti
Ulwalamano loGenesalogy 101
Ukuphucuka kweeBhayisikili zeNtaba zeNtaba